မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-02 > အဘယ်အရာကိုဒေါက်တာ Faustus မသိခဲ့ပါ
Wenn man sich mit deutscher Literatur beschäftigt, kommt man nicht an der Legende von Faust vorbei. Viele Leser der Nachfolge haben in ihrer Schulzeit von diesem bedeutenden Thema durch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) gehört. Goethe kannte die Legende von Faust durch Puppenspiele, die in der europäischen Kultur seit dem Mittelalter als moralische Geschichten verankert waren. Im 20. Jahrhundert liess der mit dem Nobelpreis gekrönte Thomas Mann die Geschichte des Mannes, der seine Seele an den Teufel verkaufte, wieder neu aufleben. Die Legende des Faust und der einhergehende Teufelspakt (im Englischen heisst dieser sogar Faustian bargain) verfolgte die Vorstellung des20. Jahrhunderts, z.B. bei der Kapitulation gegenüber des Nationalsozialismus 1933.
Faust ၏ဇာတ်ကြောင်းကိုလည်းအင်္ဂလိပ်စာပေတွင်တွေ့ရသည်။ ဝီလျံရှိတ်စပီးယား၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး ဖြစ်သည့်ကဗျာဆရာနှင့်ပြဇာတ်ရေးဆရာခရစ်စတိုဖာမာလိုသည် ၁၅၈၈ ခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာပါမောက္ခတစ် ဦး ရေးသားခဲ့သည်။ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာလေ့လာမှုများကိုငြီးငွေ့နေသော ၀ ီတန်ဘာ့ဂ်မှဂျိုဟန်နက်ဖော့စ်ကလူစီဖာနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည်။ သူသေဆုံးချိန်တွင်ဖော့စ်သည်မိမိ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပေးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လေးနှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါက Goethe ၏အချစ်ဇာတ်လမ်း၏အဓိကအကြောင်းအရာများမှာလူ့လက်သီး၏အချိန်အောင်ပွဲခံခြင်း၊ အမှန်တရားအားလုံးကိုရှာဖွေခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်မြဲသည့်အလှတရား၏အတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်။ Goethe ၏အလုပ်သည်ယနေ့ဂျာမန်စာပေတွင်အခိုင်အမာနေရာတစ်ခုရှိနေသေးသည်။
Will Durant ကဤနည်းကိုဖော်ပြသည်။
„Faust ist natürlich Goethe selbst – sogar insoweit, dass beide sechzig waren. Wie Goethe, war er mit sechzig begeistert von Schönheit und Gnade. Seine Doppelambition nach Weisheit und Schönheit waren in der Seele Goethes verankert. Diese Annahme hat die rächenden Götter herausgefordert und doch war sie nobel. Faust und Goethe sagten beide “Ja” zum Leben, geistlich und körperlich, philosophisch und heiter.“ (Kulturgeschichte der Menschheit. Rousseau und die französische Revolution)
တစ် ဦး ကဆိုးဝါးအပေါ်ယံ
Die meisten Kommentatoren nehmen von Fausts arroganter Annahme, gottgleiche Mächte zu besitzen, Notiz. Marlowes Die tragische Historie von Doktor Faustus beginnt damit, dass der Hauptcharakter das Wissen, das er durch die vier Wissenschaften (Philosophie, Medizin, Recht und Theologie) erhalten hat, verachtet. Wittenberg war natürlich der Ort des Geschehens um Martin Luther und mitschwingende Untertöne sind nicht zu überhören. Theologie war einmal als „Wissenschaft der Königin“ angesehen. Doch was für eine Torheit, dass man glaubt, alles Wissen, das gelehrt werden könnte, aufgesogen zu haben. Fausts fehlende Tiefe von Intellekt und Geist schreckt viele Leser bereits schon früh von dieser Geschichte ab.
Der Brief von Paulus an die Römer, den Luther als seine Erklärung für religiöse Freiheit ansah, sticht hier hervor: „Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden“ (Röm 1,22). Später schreibt Paulus davon, welche Tiefen und Reichtümer es zu erfahren gilt, wenn man Gott sucht: „O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen«?“ (Röm 11,33-34) ။
Faust တွင်နက်ရှိုင်းပြီးသေစေနိုင်သောမျက်စိကွယ်မှုရှိသည်။ သူသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစည်းစိမ်အားလုံးထက်အာဏာကိုလိုချင်သည်။ Marlowe ကဤသို့ရေးသားထားသည် -“ အိန္ဒိယတွင်သူတို့သည်ရွှေရောင်သို့ပျံသန်းရမည်၊ Orient ၏ပုလဲများသည်ပင်လယ်ထဲမှအမြစ်တွယ်နေပြီ၊ ကမ္ဘာသစ်၏ nooks နှင့် crannies များ၊ မြတ်သောအသီးများ၊ အရသာရှိရှိမင်းသားလေးသည်ကိုက်တတ်သည်။ သူတို့သည်ငါ့အားပညာသစ်ကိုဖတ်သင့်သည်။ Marlowes Faustus သည်ဇာတ်စင်အတွက်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီးလူသိများပြီးမသိသောကမ္ဘာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ကြီးထွားရန်နှင့်ရှာဖွေလိုသောကြေကွဲဖွယ်သူရဲကောင်းကိုပြသသည်။ သူသည်ကောင်းကင်နှင့်ငရဲတို့၏အနှစ်သာရကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စတင်သောအခါလူစီဖာ၏မက်ဖီတိုသည်တုန်ခါမှုနှင့်အတူကြိုးပမ်းမှုကိုဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။ Goethe ခံစားချက်သည်အရာရာတိုင်းဖြစ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်နတ်ဘုရားကိုတစ်ချိန်တည်းလုံးလုံးလျားလျားတည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်သတ္တဝါအဖြစ်ချီးကျူးသည်။ ဝေဖန်သူများက Goethe ၏ ၁၈၀၈ မှ Faust ကိုအကောင်းဆုံးဒရာမာနှင့်ဂျာမန်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးကဗျာအဖြစ်ချီးကျူးကြသည်။ ရှိပါတယ်။ Faust ကိုအဆုံးမှာ Mephisto ကငရဲသို့ဆွဲငင်ရင်တောင်ဒီဇာတ်လမ်းကနေရရှိမယ့်လှပတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Marlowe နှင့်အတူသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုကြာရှည်ခံနှင့်ကကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အတူအဆုံးသတ်ထားသည်။ ပြဇာတ်စဉ်အတွင်း Faustus သည်ဘုရားသခင်ထံပြန်လာရန်နှင့်မိမိအမှားများကိုမိမိနှင့်မိမိကိုဝန်ခံရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒုတိယလုပ်ရပ်မှာတော့ Faustus ကသိပ်နောက်ကျသွားပြီလားမေးတယ်။ နတ်ဆိုးနတ်ဆိုးကဒီကြောက်ရွံ့မှုကိုအတည်ပြုတယ်။ ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကသူ့ကိုအားပေးပြီးဘုရားသခင်ဆီပြန်လှည့်ဖို့ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးလို့ပြောတယ်။ နတ်ဆိုးမင်းကဘုရားဆီပြန်လှည့်လာရင်မာရ်နတ်ကသူ့ကိုဖြိုဖျက်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကအလျင်အမြန်လက်လျှော့အရှုံးမပေးဘဲဘုရားသခင်ထံလှည့်လာရင်ဆံပင်ကိုမလှည့်စားနိုင်ဘူးလို့အာမခံခဲ့တယ်။ ထို့နောက် Faustus သည်ခရစ်တော်ကိုသူ၏ရွေးနုတ်ရှင်အဖြစ်စိတ်ဝိညာဉ်အောက်ခြေမှခေါ်။ သူ၏ဖျားနာနေသောဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ရန်တောင်းပန်သည်။
ထို့နောက်လူစီဖာသည်လေ့ကျင့်ထားသောဆရာဝန်ကိုရှုပ်ထွေးစေရန်သတိနှင့်လိမ္မာပါးနပ်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူစီဖာသည်သူ့ကိုသေစေနိုင်သောအပြစ်ခုနစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ မာနထောင်လွှားခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ စားကြူးခြင်း၊ Marlowe ၏ Faustus သည်ဤဇာတိပကတိအပျော်အပါးများမှအလွန်အာရုံပျံ့လွင့်ပြီးဘုရားသခင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကိုစွန့်လွှတ်သည်။ ဤတွင် Marlowe ၏ Faustus ဇာတ်လမ်း၏တကယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သည်။ Faustus ၏အပြစ်သည်သူ၏ရောင့်တက်ရုံသာမကသူ၏ဝိညာဉ်ရေးအပေါ်ယံထက်သာသည်။ Dr. အတွက် Rand ကော်ပိုရေးရှင်းမှ Kristin Leuschner, ဒီအပေါ်ယံဟာသူကျဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့“ Faustus ကသူ့အမှားတွေအတွက်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ကြီးမားတဲ့နတ်ဘုရားတစ်ပါးကိုမတွေ့ကြုံနိုင်ဘူး”
An unterschiedlichen Stellen in Marlowes Stück drängen die Freunde von Faustus ihn zur Umkehr, denn es ist nicht zu spät dafür. Aber Faustus ist durch seinen nicht vorhandenen Glauben geblendet – der Gott der Christenheit ist tatsächlich grösser, als er sich vorstellen kann. Er ist sogar gross genug, um ihm zu vergeben.Der Akademiker Dr. Faustus, der Theologie gemieden hat, hat somit eines der wichtigsten Prinzipien der Bibel nicht kennen gelernt: „sie [die Menschen] sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist“ (Röm 3,23f). Im Neuen Testament wird davon berichtet, dassJesus einer Frau sieben Dämonen austreiben musste und sie wurde daraufhin eine seiner treusten Jünger (Lukas 8,32). Ganz egal welche Bibelübersetzung wir lesen, der Glaubensmangel an Gottes Gnade ist etwas, was wir alle erfahren.Wir neigen dazu, unser eigenes Gottesbild zu erschaffen. Doch das ist zu kurz gedacht. Faustus würde sich selbst nicht vergeben, wie kann es also ein allmächtiger Gott tun? Das ist Logik – aber es ist Logik ohne Gnade.
ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီလည်းအလားတူခံစားရလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏သတင်းတရားရှင်းလင်းပြတ်သားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဓာတ်ကျရမည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သောသူများ မှလွဲ၍ မည်သည့်အပြစ်မျိုးကိုမဆိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။ ထိုအမှန်တရားသည်ကားတိုင်၏သတင်းစကားဖြစ်သည်။ ofဝံဂေလိတရား၏သတင်းတရားမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခရစ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သောစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်မိသောအပြစ်အားလုံး၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးထက်များစွာတန်ပါသည်။ လူအချို့ကဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်မှုကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံသောကြောင့်သူတို့၏အပြစ်များကိုချီးမြှောက်ကြသည် -“ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သည်ကြီးလွန်းလှသည်။ ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး။
Doch diese Annahme ist falsch. Die Botschaft der Bibel bedeutet Gnade – Gnade bis zum Ende. Die Gute Nachricht des Evangeliums ist, dass die himmlische Amnestie sogar für die schlimmsten Sünder gilt. Paulus selbst schreibt als ein solcher: „Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben” (1. တိ1,15-16) ။
Weiter schreibt Paulus: „Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden“ (Röm 5,20). Die Botschaft ist eindeutig: Der Weg der Gnade ist immer frei, auch für den schlimmsten Sünder. Wenn Dr. Faustus doch nur das wirklich verstanden hätte.
နီးလ် Earle ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်